Maxaabiis Ka Baxsatay Xabsi Ku Yaala Dalka Filibiin. – Bogga Calamada.com
Maxaabiis Ka Baxsatay Xabsi Ku Yaala Dalka Filibiin.
August 29, 2016 9:30 am Views: 11
Xoogag hubeysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Jamaacaatka islaamiga ah ayaa maalintii shalay weerar ku qaaday Xabsi kuyaalla magaalada Mallaawi ee Koonfurta dalka Filibiin, iyagoona halkaas ka sii daayay 28 Maxaabiis ah.
Sarkaal ka tirsan Booliiska ayaa sheegay in Weerarka lagu qaaday Xabsiga uu dhacay 5:40 daqiiqo ee galabanimo ee maalintii shalay, iyadoona 50 dabley ah oo ku hubeysan hub culus ay weerareen Saldhigga.
Dadka Xabsiga ka baxsaday waxaa ku jira Sideed ruux oo ka tirsanaa kooxda hubeysan ee lagu magacaabo Maawt, kuwaas oo ku eedeysnaa heysashada hub iyo waxyaabo qarxa, waxaana sidoo kale halkaas ka baxsaday labaatan Maxbuus oo kale.
Sarkaal Booliiska ka tirsan ayaa sheegay in Kooxda weerarka soo qaaday ay hubka ka dhigeen ilaalada Xabsiga, islamarkaana ay horey usii qaateen hubkii yaallay Xabsiga iyo gaari ay lahaayeen Ciidamada Booliiska.
Jeneraal ka tirsan Ciidamada Meliteriga Dowladda Filibiin oo Wareysi siiyay Idaacadda lagu magacaabo ZPP waxa uu xusay in Ciidamada Booliiska ay ka gacan siinayaan soo qabashada Maxaabiistii ka fakaday Xabsiga magaalada Mallaawi, isagoona tilmaamay inay baahiyeen Sawirrada Maxaabiitii baxsatay.
Jamaacada lagu magacaabo Maawt waxay ka mid tahay Kooxaha hubeysan ee ka dagaallama Koonfurta dalka Filibiin, waxaana lagu eedeeyay inay ka dambeysay weerarro, qaraxyo iyo Afduubyo ka dhacay Gobolka lagu magacaabo Miidnaaw ee Koonfurta dalkaasi.
Bishii lasoo dhaafay waxaa gobolkaasi ka dhacay iska hor imaadyadii ugu cuslaa ee dhexmara Ciidamada Meliteriga dalka Filibiin iyo Jamaacada lagu magacaabo Maawt, waxaana iska hor imaadyadaasi ay sababeen dhimashada inkabadan 30 ruux.